Wabiga Shabeelle oo ku fatahay Xaafado ka mid Baladweyne | XORRIYA NEWS
Home Wararka Wabiga Shabeelle oo ku fatahay Xaafado ka mid Baladweyne
Wabiga Shabeelle oo ku fatahay Xaafado ka mid Baladweyne
Wabiga Shabeelle oo baryihii dambe shaki laga cabsi qabay in uu fatahaad ka geysto Baladweyne ayaa saacadihii la soo dhaafay ku fatahay xaafado ka tirsan magaalada Beledweyne, iyadoo la arkayay saakay dadka deegaanka oo bilaabay barakac.
Xaafadaha Lama galaay, Kooshin, Kutiinbo iyo Raadeerka ayuu wabiga ku fatahay.
Fatahaada ayaa ka timid, kagadaal markii roobab ay ka da’een deegaano dhowr ah, isla markaana wabiga uu aad u biyo keenay, taasoo keentay inuu karkaarada jabsado.
Xaafadaha uu Wabiga ku fatahay ayaa waxaa kamid ah Xarunta Lama galaay oo ay degan yihiin dhammaan Waaxyaha Maamulka, Xaafada Kooshin, Kutiinbo iyo Raadeerka.
Wararka ayaa sheegaya in dad badan ay ka barakaceen xaafadaha, kuwaasoo aaday dhinaca deegaanka Ceel Jaale ee duleedka Beledweyne.
Maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa socday dadaalo xooggan oo lagu moosayo jiinka wabiga, si aanu wabiga uga soo fatihin, waxaana loo dhigayay carro tuur badan halkii wabiga ka jabsado, waxaana muuqata in xowliga biyaha ay ku socdaan la celin la’yahay, taasna ay keentay in xaafado dhowr ah inay biyaha soo galaan.
Maamulka Gobolka Hiiraan iyo Guddiga Gurmadka magaalada Beledweyne ayaa ku adkeysanayey inaan magaalada laga barakicin oo la xaliyey fatahaaddii Wabiga, laakiin saaka waxaa ka muuqata magaalada inay xaalad adag ka jirto oo wabiga uu daad xoog leh saameeyay.